Myanmar Embassy, Washington, D. C. Election, 2300 S St NW, Washington D.C., DC (2021)
To inform updates on the General Elections held in Myanmar and its outcomes to the public
President U Thein Sein has invited political parties toameeting in Yangon on 15 November 2015 to discuss the post-election political situation.
US President Obama made phone calls to Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Daw Aung San Suu Kyi.
POLITICAL PARTIES SHOULD ACCEPT ELECTION RESULTS WITH MAGNANIMITY
PRESIDENT U Thein Sein has urged political parties to accept the results of the November 8 election with magnanimity, saying that the upcoming election will be free and fair. In his election speech broadcast last night, the president said he firmly believed that the upcoming election will be free and fair and that it will reflect the desires of the people. He acknowledged that there have been many challenges along the way in fulfilling the administration’s desire to hold smooth elections. President U Thein Sein reiterated that the government and the army will respect the results of the upcoming election and added that he is aware that there is some anxiety about this among the public. He said that his party would welcomeanew government as determined by the election results and emphasised that it must be in conformity with the terms of the constitution. He expressed confidence that the leaders of political parties will accept the results of the election. In order for peace to prevail during the post-election period, the president said that he will hold talks with leaders of political parties to discuss solutions for any potential issues. He also urged all those eligible to vote to cast their votes this Sunday, saying that the upcoming election representsakey part of Myanmar’s new political climate. The UEC has already made arrangements for citizens to avoid unnecessarily losing their voting rights on election day, he added. President U Thein Sein ended his speech by urging the leaders of political parties to be far-sighted and magnanimous during the upcoming election, which will also be keenly watched by the international community.—GNLM
MORE THAN 10,500 OBSERVERS TO MONITOR ELECTIONS
More than 10,500 foreign and local observers will monitor the upcoming 8 November election.
The Union Election Commission has issued accreditation cards to 470 diplomats from 32 international embassies, 465 staff from six international election observation bodies, 183 staff from nine international organisations that are assisting in electoral processes and 9,406 staff of local observation organisations, according toastatement released by the UEC on2November 2015.
More than 290 media personnel from 45 foreign media organisations will cover the election, according to the UEC.
In its statement, the UEC urged the observers to abide by the UEC Code of Conduct drafted for observers and the existing laws of Myanmar in order to avoid bias. The UECis committed to holding the upcoming election with transparency and democratic principles, the Monday statement said. The government requested diplomats and foreign election observers to refrain from activities that could be construed as being biased or that may negatively impact the country’s ability to hold free and fair elections.
Atameeting with diplomats and election observers held in Nay Pyi Taw about two weeks ahead of the 8 November election, Union Minister for Foreign Affairs U Wunna Maung Lwin said the diplomatic community has an obligation to abide by the Union Election Commission’s Code of Conduct. He said it also has an obligation to adhere to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and called for the cooperation and support of the diplomatic community for holdingageneral election that is peaceful, credible and transparent.
UEC chairman U Tin Aye called on ministries to cooperate in providing observers with hospitality and convenience services and to announce the results of the election on time. The UEC’s media centre and the Ministry of Information are currently working together to announce the results of the election on the election day.
A total of 6,065 candidates will compete for the seats in parliament. Male candidates make up the 86.8 percent of the total, with 5,274 women making up the rest, according to statistics from the UEC. The UEC will not hold elections in five of the country’s 330 townships due to security concerns.—GNLM
Ambassador U Kyaw Myo Htut's article "A Milestone in Myanmar's Democratic Journey" is mentioned in "The Hill" of the US Congress Blog and "The Washington Times".
ဘာသာပြန်ဆိုချက်၊ " မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းပေါ်က သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု"
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတကာလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနဲ့ သတင်းဌာနများက ပြောနေကြတဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို ပြောနေကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူနိုင်မယ်၊ ဘယ်သူကအစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုတာကို မည်သူမျှမသိနိုင်သေးပါဘူး။
ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအင်အားကောင်းမှုကို ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ထိရောက်စွာပံ့ပိုးဆောင်ရွက် ပေးနေမှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်သူများအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရေး ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်က တံခါးပိတ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ပြည်သူများပါဝင်မှုကိုကြိုဆိုပြီး၊
ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ ပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကူးပြောင်းလာမှုကို အားပေးရာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ခုနှစ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ လက်ရှိအစိုးရသစ်တာဝန်ယူချိန်မှစပြီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆောင်ရွက်လာခဲ့ ပါတယ်။ ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု၊ နိုင်ငံတကာမှအထီးကျန်မှု နဲ့ စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ ရှေ့သို့ခရီးနှင်လျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစွာကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်လည်း ၂၀၁၂ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကတစ်ဆင့် လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပိုမိုရလာသလို၊ ပြည်သူများအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်ခွင့် ပိုမိုရရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ဟာလည်း ဗဟိုကချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ကနေ ဈေးကွက်အခြေခံတဲ့စနစ်သို့ ပာင်းလဲလျက်ရှိလာရာမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပြည်တွင်းမှ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် များကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလျက်ရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ၊ အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမှာ
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တင်းမာမှုတွေ ကို များစွာလျော့ပါးစေခဲ့ပြီး၊ နှစ်ပေါင်း(၆၀)နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားများအကြား ပဋိပက္ခကို ချုပ်ငြိမ်းစေမယ့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်
အခြေခံ အုတ်မြစ်များကို ချမှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာ သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်စေမှာကတော့ လူဦးရေ (၅၂)သန်း ရှိတဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူ သန်း(၃၀)ကျော်ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နဲ့ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်များမှ လွှတ်တော်အမတ်နေရာစုစုပေါင်း (၁၁၇၁)ဦး ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ယင်းတွင် ၂၀၁၀နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ အကြီးဆုံး
အတိုက်အခံပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် ပါတီပေါင်း (၉၀)ကျော်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၆၀၀၀)ကျော်ထဲက မဲဆန္ဒရှင်များက ရွေးချယ်ဆန္ဒမဲပေးရမှာ ဖြစ်
ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးယှဉ်ပြိုင်မှု ဘယ်လောက် ကြီးမားတယ်ဆိုတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ လွတ်လပ်တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများ ဖြစ်ရေးကို ကတိက၀တ်ပြု ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်(၁၆)ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြီးကြပ်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်း အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ International Foundation for Electoral Systems ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆီကလည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအကူအညီများရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကာတာစင်တာ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကို
ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရ၊ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်နဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ အရာရှိကြီးများကိုလည်း လာရောက်လေ့လာဖို့ခွင့်ပြုပေး ထားပါတယ်။
လက်ရှိနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ နိုင်ငံရေးစည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ် ပြုလုပ်နေကြတာ ကိုလည်း နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖေါ်ပြပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ
ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့လည်း မည်သူအနိုင်ရရှိစေကာမူ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လက်ခံ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ နဲ့အညီ၊ လာမယ့် မတ်လအတွင်း ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့သစ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အာဏာလွှဲပေးဖို့ အတိအလင်း အတည်ပြုအာမခံပြောကြားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နည်းပညာပိုင်းအရစွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များရှိသလို၊
ဒီမိုကရေစီ အတွေ့အကြုံ နည်းပါးနေသေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထားစရာမရှိပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းက သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းလျက်၊ လက်ရှိ မဲစာရင်းမပြည့်စုံမှု၊ ကြိုတင်မဲများမမှန်မကန်ပြုလုပ်မည်ကိုစိုးရိမ်မှု နဲ့ မတည်ငြိမ်တဲ့အရပ်ဒေသများမှာ လုံခြုံစွာ မဲပေးနိုင်ရေး ကဲ့သို့သော အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
သို့ရာတွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို တာတိုအပြေးပြိုင်ပွဲကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ၊ တာဝေးမာရသွန် အပြေုးပြိုင်ပွဲကဲ့သို့ အရှိန်မှန်မှန်နဲ့ချီတက် နေတာဖြစ်ပြီး၊ ခရီးလမ်းမှာလည်း မကြာခဏ အဖုအထစ်များ ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။
(၄)နှစ်သက်တမ်းသာ ရှိသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရက်စီ
ဆိုင်ရာအသိအမြင်များ ရင့်ကျက်ခိုင်မာဖို့ လိုအပ်နေသလို၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့
ဥပဒေစနစ်ဖြစ်လာအောင် မြှင့်တင် နိုင်ဘို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများက
မိတ်ဆွေများနဲ့အတူ မြန်မာပြည်သူများနဲ့ ရွေးချယ်တင် မြှောက်ခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မိမိအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို တိုးတက်ခိုင်မာရေး၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူ
စာချုပ်မှာ ပိုမိုပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလာရေးနဲ့ စီးပွားရေးဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။
၂၀၁၁ခုနှစ်က စပြီး၊ မိမိတို့တိုင်းပြည် စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးလာခဲ့ရာမှာ နှစ်စဉ် ဂျီဒီပီတိုးတက်မှု (၇)ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက် တိုးတက်လာတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာလည်း
ဆက်လက်တိုးတက်လျက်ရှိရာမှာ ၂၀၁၀နှစ်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၉.၇)သန်းသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၅)သန်းကျော်သို့ တိုးတက် လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတော့ အမေရိကန်အပါအ၀င် ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး
မြှုပ်နှံမှု ဟာ ၂၀၁၀နှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၉၀၀)ခန့်မှ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈)ဘီလီယံကျော်အထိ တိုးမြှင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားကဏ္ဍမှာတော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်က (၈)သိန်းခန့်သာ လာရောက်ခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်မှာ (၅)သန်းအထိ ရှိလာဖို့
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မည်သူတွေအနိုင်ရရှိမည်ကို မသိနိုင်သည်မှာ အမှန်ဘဲဖြစ်
ဒါပေမယ့် အထက်ပါကိန်းဂဏန်းတွေအရ၊ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် နဲ့အတူ မြန်မာပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာဟာ ယခင်ကတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀တွေကို ခံစားလျက်ရှိတာကို လည်း တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ ခေါင်းဆောင်များပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့အကြောင်းမရှိပါကြောင်း
Photos from Myanmar Embassy, Washington, D. C. Election's post
အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မျိုးထွဋ်မှ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်
Voting-3 at the Embassy of Myanmar, Washington, DC on 18 October 2015
Voting-2 at Myanmar Embassy, Washington DC on 19 October 2015
Voting at Myanmar Embassy in Washington DC on 18 October 2015
Voters at Myanmar Embassy on 18 October 2015. Mission was successfully and smoothly accomplished, with the kind understanding and forgiveness of some voters eventhough their ballots were missing as not received at the embassy.
Voters come and vote at the Embassy of Myanmar in Washington DC on 17 October 2015.
The first voter of the day at the Embassy of Myanmar in Washington DC on 17 October 2015.
Deputy Chief of Mission U Min Thein explains toavoteraprocedure how to cast vote.
Voters come and receive the ballots signed by Polling Station Master (Ambassador U Kyaw Myo Htut)
In addition to its best services, Myanmar Embassy, Washington DC sincerely treats voters with Mont-Hin-Gha. However, the Embassy truly and kindly conveys its regrets and sympathy to other citizens of Myanmar who miss the opportunities to vote due to various reasons. We wish all the citizens of Myanmar's dream comes true through this election toward the better life of our people and emergence ofaperfect democratic and developed nation.
Good Luck MYANMAR!
Voters- Group2at Myanmar Embassy, Washington DC on 17 October 2015 Saturday
Voters at Myanmar Embassy, Washington DC on 17 October 2015 Saturday
Vote at Myanmar Embassy in Washington DC on 17 October 2015 Saturday
According to http://uecmyanmar.org
ဝါရှင်တန်မြို့၊ မြန်မာသံရုံးတွင် ၁၇-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့နှင့် ၁၈-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့များ၌ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအတွင်း လာရောက် မဲပေးနိုင်သူများ၏ အမည်စာရင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် အဆင်ပြေမည်ဆိုပါက ၁၇-၁၀-၂၀၁၅ ရက် (စနေနေ့) တွင် လာရောက်၍ ဆန္ဒမဲပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Credit: May Hnin Aye
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် ပယ်မဲမဖြစ်စေရေးအတွက် သတိထားရမည့်အချက်များအား ပြန်လည်မျှဝေအပ်ပါသည်။
Credit: Myanmar Justice & Peace Network
Kindly share the undermentioned information to get more eligible voters of Myanmar citizens in the United States.
Myanmar Embassy, Washington, D. C. Election's cover photo
Be the first to know and let us send you an email when Myanmar Embassy, Washington, D. C. Election posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
In addition to its best services, Myanmar Embassy, Washington DC sincerely treats voters with Mont-Hin-Gha. However, the Embassy truly and kindly conveys its regrets and sympathy to other citizens of Myanmar who miss the opportunities to vote due to various reasons. We wish all the citizens of Myanmar's dream comes true through this election toward the better life of our people and emergence ofaperfect democratic and developed nation. Good Luck MYANMAR!